ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ကို နိုင်ငံရေး လက်နက်သဖွယ် အသုံးချလာနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ကြီးများ နဲ့ ခေတ်ပျက် သူဌေးကြီးများ… – သတင်းထူး – Thadin Htoo
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ကို နိုင်ငံရေး လက်နက်သဖွယ် အသုံးချလာနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ကြီးများ နဲ့ ခေတ်ပျက် သူဌေးကြီးများ…
ကာ ကွယ် ဆေး နဲ့နိုင်ငံရေး (ကာကွယ် ဆေးကို ကျန်းမာရေး အတွက် ဦးစားပေး မထုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးအ ကျိုးစီးပွာ းအတွက်ဦးစားပေးထုတ်လေေ သာအခါ။) COVAX ဆို တဲ့ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အားလုံးက ပြည် သူတွေရဲ့ (၂၀) ရာနှုန်း မရှိမဖြစ်သူတွေဦးစားပေး ကာကွယ်ဆေးရရှိရေးအစီ အစဉ် အဖွဲ့ကြီး အောင်မြင် စွာ လက်မှတ် ရေးထိုးပြီး ပါပြီ ။
တ ရုတျ ၊ အမရေိ ကနျ ၊ ရုရှား ထို သုံးနိုငျငံ လကျမှတျ မထိုးပါ။ နောငျ ပါဝငျ လာနိုငျရငျ ကောငျးပါတယျ။ ကာကှယျဆေးကို အရငျဆုံးရပါတယျ ဆိုပွီး ကိုယျ့ဟာ ကိုယျ ပထမဆုပေး တဲ့ ရုရှားကလ ညျး လုံးဝလ ကျမှတျမထိုး။ ကာ ယျဆေးကိုေ ရှ့ဆုံးက စလု ပျခဲ့တဲ့အမရေိကနျ ကလညျးWHO က ဦးဆောငျ ဦးရှကျ လုပျလို့ဆိုပွီး လကျ မှတျ မထိုး။ ကာကှယျဆေးကို ပွညျပစြေးကှကျကို မကွာခငျမှာ အားရ ပါးရထုတျ ရောငျးတော့ မယျ့ တရုတျကလညျး လကျမှတျမထိုး။ ကာကှယျဆေးတော့အမွနျစြေးကှကျပို့ဖို့လုပျနပွေီး COVAX ကတြော့ လကျမှတျမထိုး တဲ့ သူတို့ရဲ့ေ စတနာ ကိုေ မးစရာဖွစျ လာပါ တယျ ။
ကျနော့် ကို ကာကွယ်ဆေး ဘယ် တော့ရမလဲ? ရုရှားက ထုတ်ရောင်းတော့မှ ာသေချာလား? တရု တ်က မကြာခင်ေ ရာင်းတော့မှ ာလား? ရောင် းနေပြီမ လား? စတဲ့ မေးခွ န်းတွေ မေးတဲ့ သူတွေကို ပြန်ဖြေရ ရင် ကာကွယ်ဆေး ကိစ္စဟာ ကျန်းမာရေး သီးသန့်မဟုတ်ပဲ နိုင် ငံရေး စီးပွားရေး လက်ဦးမှု ယူတာတွေပါလာတဲ့အတွက် ကာကွယ်ဆေးကိစ္စမှာ ကျနော်ဘာမှအကြံမပေးလိုပါ။ကိုယ့် risk ကိုယ် ယူရဲရင် ကိုယ်တာဝန်ယူထိုးရတော့မယ့်ပုံပါ။ ကျနော့်ကို ငယ်စဉ်ကအဖိုးကြီးတစ်ယောက်ပြောဖူးတာသိပ်မှန်ပါတယ်။ ခေတ်ပျက် ရင် စီးပွားရှာရ တာပိုလွယ် တယ်တဲ့။ သွေးထွက် အောင်မှန်တဲ့စကားမှန်း ကိုဗစ်ကာလမှသိလာရပါတယ်။
တရုတျ နဲ့ ရုရှားဟာ ကမ်ဘ ာ့က ာကှယျဆေး လုံခွုံစိတျခရြမှု စံခြိနျစံညှှနျးတှကေို ခြိုးဖော ပွီး စြေးကှကျလကျဦးမှုယူ ဖို့နဲ့ နိုငျငံရေးမကြျနှာသာရ ဖို့ ကာ ကှယျဆေး ကို စြေးကှ ကျထဲပို့ဖို့လုပျနတေဲ့အကွေ ာငျးကို ဝါရှငျတနျပို့စျ သတငျးစာမှာဖတျရပါတယျ။ ကနြော့ျအာဘောျမဟုတျပါ။ ဝါ ရှငျတနျပို့စျရဲ့အာေ ဘာျကို စဉျးစားစရာတစျခုအဖွစျ မြှဝခွေငျးသာဖွစျပါတယျ။ ကမ်ဘာ့ နိုငျငံ အသီသီးရှိအစိုးရတှဟော ကိုဗစျတိုကျပှဲမှာ မကြျဖွူ ဆိုကျနပေါတယျ။ ပွညျသူတှကေ ကာကှယျဆေးကိုရှှထေကျပိုလိုခငြျနတေယျ။ အစိုးရကို ကာကှယျဆေးအမွနျဆုံးရဖို့ ဖိအားတှပေေးနတေယျ။ အစိုးရတှဟော ကာကှယျဆေးကို ပွညျသူတှေ လကျထဲ စောစောခပြေးနိုငျတာနဲ့ နိုငျငံရေးမကြျနှာသာရမယျ။ အစိုးရတှေ မကြျဖွူဆိုကျလေ ကာကှယျဆေးကိုငျထားတဲ့ ဆရာကွိုကျလပေါပဲ။
တရုတ်နဲ့ရုရှားဟာ ကာကွယ်ဆေး ကို အစိုးရတွေ ဆီချပေး ပြီး သံတမန်ရေး လက်နက်အဖြစ် နိုင်ငံရေးမျက်နှာသာရဖို့ သုံးနေတာကို ပညာရှင် တွက အတော်စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ အမေရိကန်မှာ ထရမ့်ကလည်း ကာကွယ်ဆေးကိုရွေးကောက်ပွဲအမီဖြန့်ဝေဖို့လုပ်နေလို့ ပညာရှင်တွေ က ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ ခေတ်ပျက်တော့ သူဌေးဖြစ်ဖို့ နိုင်ငံရေးမျက်နှာရဖို့ ကာကွယ်ဆေးကိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေက ကြံစည်နေပါ တယ်။ Vaccine Nationalism မလုပ်ကြဖို့ WHO က သတိပေးနေပါပြီ။
ထူးဆန် းတဲ့အချက် တစ်ခု ကိုပြောပါမယ်။Oxfam ရဲ့ စစ် တမ်း report အရ ချမ်းသာ တဲ့နိုင်ငံတွေ ဟာ အခု ထုတ်နေတဲ့ ကာကွယ်ဆေး ပမာဏရဲ့ ၅၁ ရာနှုန် းကို ကြိုတင် ဝယ်ယူပြီးတာ ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ သူတို့ဟာကမ္ဘာ့လူ ဦးရေရဲ့ ၁၃ ရာနှုန်း ပဲရှိပြီး ကာကွယ် ဆေးရဲ့ ၅၁ ရာနှုန်းကို ကြိုတင်ဝယ်ယူထားတာကို တရားပါရဲ့လား လို့ မေးခွန်းထုတ်နေတာပါ။ ကျန်တဲ့ ကာကွယ်ဆေးပမာဏ ၂.၇၅၇ ဘီလီယံကို တရုတ်၊ ဘရာဇီး၊ အိန္ဒိယ၊ အင်ဒိုနီးရှား နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် လိုနိုင်ငံတွေက ဝယ်ယူထားပါတယ်တဲ့။
တရားကျ စရာက တရုတ် နဲ့ ရုရှား တို့ဟာ သူတို့ကာကွယ်ဆေးကိုသာပြည်ပကိုတင်ပို့ဖို့လုပ်နေတာ အနောက်နိုင်ငံကကာကွယ်ဆေးတွေကိုကြ တော့ ကြိုတင်ဝယ်ယူထားကြသဗျ။ သူတို့ကာကွယ်ဆေးတကယ်ကောင်းရင် အနောက်တိုင်းကဆေးတွေကို ဘာလို့ကြိုဝယ်နေသေး သလဲ မေးစရာဖြစ် လာပါတယ်။ သူ့ပြည်တွင်းမှာလည်း ထိုးတော့ထိုးပေးပါရဲ့ ပြည်ပဆေးလည်းမှာတယ်။ မလောက်လို့မှာရင် ဘာလို့ပြည်ပ ကို အလုံးအရင်းနဲ့ပို့ဖို့ လုပ်နေလဲမေးစရာဖြစ်လာရော။ တရုတ်နဲ့ရုရှားကာကွယ်ဆေးတွေဟာ ထုတ်သာရောင်းဖို့တွန်းလုပ်နေတာ အ ခုထိ Phase3clinical trials စမ်းသပ်မှုတွေက မပြီးသေးပါဘူး။
စိတ်မချရ တဲ့ကာကွယ်ဆေးကြောင့် လူသေေ စနိုင်တဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ တ သက်လုံး ခုတင်ပေါ်ကမဆ င်းရပဲ အကြောသေသွားနိုင်ပါ တယ်။ ၁ ၉၅၅ ခုနှစ်က Cutter Incident ကနေ လူတွေေ သမှု၊ မသေတဲ့လူအချို့မှာ အကြောသေသွားမှု၊ ၁၉၅၅-၁၉၆၃ Simian virus 40 ကင်ဆာဖြ စ်စေနိုင်မှု၊ ၁၉၇၆ Swine Flu Vaccine ကနေ အကြောသေရောဂါဖြစ်မှု။ အရင် post မှာ ကျနော်ရေးဖူးလို့အသေးစိတ်မရေးခဲ့တာပါ။ ယူ အေအီးက ဝန်ကြီးထိုးတယ်။ ဟုတ်ပြီ။ က ာကွယ်ဆေး error ဆိုတာလူတိုင်းလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဖြစ်ရင်လည်း သေတတ်တယ်။ ကိုဗစ် ကလည် းလူတိုင်းကူးတာမဟုတ်။ ကူးတဲ့လူတိုင်းလည်း ရောဂါမပြင်းထန်ဘူး။ သေတဲ့သူကျလည်းသေတယ်။ အဲ့နှစ်ခုချိန်ထိုးစဉ်းစား ပေါ့။ မနေ့ကပဲ အမေရိကန် FDA က ကာကွယ်ဆေးစစ်ဆေးခွင့်ပြုမှုအဆင့်အတန်းကို သေချာကိုင်တွယ်ဖို့ စာထုတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
ကျနော် တို့အတွက် သင်ခန်း စာများPhase3လည်း မပြီးသေးကမ္ဘာ အဆင့်အတန်းမီလက်မှတ်မရသေးတဲ့ ကာကွယ်ဆေးကို ကိုယ့်သားသမီးကိုယ့်မိဘတွေကို ထိုးပေးကြမလား? ကိုယ့် ဘာသာကိုယ်ချိန်ပါ။ ဖြစ်သွားရင် အန္တရာယ်မကင်းရင် အကြောသေကနေ အသက်သေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်း ရင် တောင် အာနိသင်မထက်မြက်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကအာနိသင်ထက်မြက်တယ်ထင်ပြီး လူတောထဲသွားပြီးကူးလာရင် အန္တရာယ် ကြီးလွန်း လှပါတယ်။ ကိုယ်ထိုးတဲ့ကာကွယ်ဆေးက အတုအပမဟုတ်ကြောင်း သူများအာမခံတာထက် #ကိုယ့်အသက်နဲ့ကိုယ်အာမခံရ မှာမို့ဆင်ခြင်ကြပါ။ အရင်ဦးအောင်ဝယ်ထိုးရင်း ကိုယ်အရင်ရောဂါရသွားနိုင်တာကို သတိပြုပါ။ သူတို့ထုတ်တဲ့ဆေးကိုယ့်ရောင်းပြီး သူတို့ ကျ FDA အသိအမှတ်ပြု ကာကွယ်ဆေးကိုဝယ်နေတဲ့လူတွေကို သတိထားပါ။ မကြာခင်ကာကွယ်ဆေးလုပ်စားတွေပေါ်လာပါတော့ မယ် ။
ကျ နော် အ ရေးကြီး တာကိုမေးပါမယ်။အခုရ တဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထို းပြီးမှ တကယ့်အသိအမှတ်ပြုကာကွယ်ဆေးပေါ်လာရင် ဘာလုပ်မလဲ? ထပ်ထိုးရင် ရှော့ဖြစ်ကုန်မလား? မနေ့ကတွေး မိတာလေးပါ။ ဒီအကြောင်းဒီနေ့ရေးပေးပါ့ မယ်။ နိုင်ငံတော် အ စိုးရအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးအမြန်ဆုံးရဖို့ကြိုးစားနေတာကိုတွေ့ရပါ တယ်် ။ အစိုး ရ အချင်းချင်း G2G ရဖို့ကြိုးစားရာမှာ ကာကွယ်ဆေးအရည်အသွေးဟာ အာမခံချက်ပိုရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေဟာ နေ့စဉ်ရောဂါပိုးနဲ့ ထိတွေ့နေရတာမို့ အစိုးရနေနဲ့အမြန်ဆုံး G2G စီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည် ဟာ ရုရှားက ကာကွယ်ဆေးထွက်ပြီဆိုတာနဲ့ ဩဂတ်စ်လဆန်းကတည်းက WHO ရဲ့ Approval ကိုတောင်းခံခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ် ။ အခုလို WHO ကနေ Approval ထောက်ခံချက် ယူတာဟာ ကောင်းမွန်တဲ့လုပ်ရပ်မို့ထောက်ခံပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်ကတော့ FDA အသိ အမှတ်ပြုကာကွယ်ဆေးကို စောင့်ပါမယ်။ ကာကွယ်ဆေးထက် Mask အရည်အသွေးကောင်းကောင်းနဲ့ မကူးအောင် ခပ်ခွာခွ ာနေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။ တကယ်တမ်းပြောရရင် Mask ဟာ သုံးတတ်ရင် ကာကွယ်ဆေးထက်ပိုစိတ်ချရကြောင်း ပညာရှင်တွေ ကထောက်ပြ နေပါပြီ။
ကျနော့် အ နေနဲ့ FDA က အသိအမှတ်ပြုတဲ့ဆေးရရင်တော့ ထိုးမှာပါ။ ကိုဗစ်အတွက် ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် #ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံပါ။ တရုတ်နဲ့ ရုရှား ကကာကွယ်ဆေးတွေကိုလည်း အစွမ်းထက်ပြီးအန္တရာယ်ကင်းစေချင်ပါတယ်။ အခုထိတော့ ဘယ်ကာကွယ်ဆေးမှ FDA အသိ အမှတ်ပြုမအောင်မြင်သေးပါကြောင်း။ ဒါ့ကြောင့်ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ် ထိုးရန်သာဖြစ်ပါတယ်။ကျနော်တို့ ကတော့ ဖြစ်နေတဲ့ လက် ရှိသတင်း ကို တတ်နိုင် သမျှ မျှဝေပေး ပါ့မယ် ။